Semalt शीर्ष5वेब स्क्रैपरहरूमा सहयोगी मुद्दाहरू प्रदान गर्दछ
अक्सर, हामीलाई चाहिने जानकारी साइटमा फस्न थाल्छ, र हामी यसलाई स्क्र्याप गर्न वा क्रल गर्न सक्दैनौं। जबकि केही साइटहरूले डाटा सफा र संरचित ढाँचामा प्रस्तुत गर्न प्रयास गर्दछन्, अन्यले कुनै वेब क्रलिंग वा डाटा स्क्र्यापिंग सुविधा प्रदान गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले उत्तम वेब क्रलरहरू, खानीहरूको, र स्क्र्यापरहरूको पहुँच गर्न आवश्यक पर्दछ। यहाँ हामीले यस सम्बन्धमा शीर्ष पाँच उपकरणहरू छलफल गरेका छौं।
Webhose.io हामीलाई अनलाइन स्रोतहरू र साइटहरूबाट वास्तविक समय डाटा प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि यो कार्यक्रम माइन र साइटहरु लाई सहजै क्रॉल गर्दछ र सफा र संगठित ढाँचामा डाटा प्रस्तुत गर्दछ। यसले तिनीहरूका कुञ्जीशब्दहरू, वाक्यांशहरू, भाषाहरू, र प्रकृतिमा आधारित डाटा स्क्र्याप गर्न सक्षम गर्दछ। अन्तिम परिणामहरू XML, RSS र JSON फाईलहरूको रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यद्यपि यो कार्यक्रम नि: शुल्क हो, तपाईं यसको प्रीमियम संस्करण पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं व्यावसायिक उद्देश्यका लागि Webhose.io प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने। भुक्तान गरिएको योजनाले तपाईंलाई मुख्य सर्भरमा बहु HTTP अनुरोधहरू पठाउनको लागि सक्षम गर्दछ, तपाईंलाई साइटहरू स्क्र्याप गर्न र क्रल गर्न यो सजिलो बनाउँदछ।
Scrap इन्टरनेट मा एक शक्तिशाली र अद्भुत स्क्र्यापिंग र क्रॉलिंग फ्रेमवर्क हो। यसको उत्तम पक्ष यो हो कि यस कार्यक्रमलाई विशेषज्ञहरूको समुदायले समर्थन गर्दछ, जसको साथ तपाईं उपयोगी सुझावहरू र ट्यूटोरियलहरूको लागि कुनै पनि समयमा, कहिँ पनि सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको डाटालाई स्क्र्याप र पार्स गर्न मद्दत गर्दछ र यसलाई CSV र JSON जस्ता विभिन्न ढाँचामा बचत गर्दछ।
Out. आउबिट हब:
यदि तपाईं कोडसँग सहज हुनुहुन्न भने, आउटविट हबले तपाईंलाई उपयोगी भिजुअल इन्टरफेस प्रदान गर्दछ, तपाईलाई डाटा क्रॉल गर्न र मेरा लागि सजिलो बनाउन। यसको होस्ट गरिएको संस्करण आधिकारिक साइटमा उपलब्ध छ, र नि: शुल्क संस्करण कुनै पनि अनलाइन स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। आउटविट हब फायरफक्स एक्सटेन्सन हो कि तपाइँसँग प्रोग्रामिंग सीप हुन आवश्यक पर्दैन।
आउटविट हबको जस्तै, अक्टोपार्से एक शक्तिशाली वेब स्क्रेपर, क्रलर, र डाटा खानी हो। यसले जाभास्क्रिप्ट, कुकिज, रिडिरेक्टहरू, र AJAX प्रयोग गरेर स्थिर र गतिशील साइटहरू दुवै ह्यान्डल गर्दछ। यस वेब प्रोग्रामले कुनै पनि साइट वा ब्लग निकाल्न मद्दत गर्दछ र दुबै आधारभूत र उन्नत प्रकारका डाटा निकाल्दछ। तपाईंलाई आवश्यक सबै मूल्यवान जानकारी अक्टोपार्सको क्लाउड भण्डारण क्षेत्रमा स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले तपाईंलाई एक घण्टा भित्र बल्क वेबसाइटहरू निकाल्न सक्षम गर्दछ, र तपाईं अक्टोपार्स एपीआईको साथ सबै भन्दा राम्रो गुणस्तर पाउनुहुनेछ। मलाई यहाँ तपाईं बताउन दिनुहुन्छ कि यो फ्रीवेयर विन्डोजको लागि मात्र सहयोगी हो र कुनै अन्य अपरेटि। प्रणालीको लागि उपलब्ध छैन।
Chrome. क्रोमका लागि वेब स्क्रेपर:
यदि तपाईंसँग गुगल क्रोम तपाईंको प्राथमिक वेब ब्राउजरको रूपमा छ भने, तपाईंले वेब स्क्र्यापरको लागि अप्ट गर्नुपर्नेछ। यो एक उत्कृष्ट क्रललि and र खनन प्रोग्राम हो जुन तपाइँलाई तपाइँको दुवै व्यक्तिगत ब्लगहरू र व्यापार वेबसाइटहरूको लागि साइटम्यापहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंले भर्खर क्रोम ब्राउजरमा डाउनलोड गर्न, स्थापना गर्न र यस स्क्र्यापर थप्नुपर्नेछ र हेर्नुहोस् जुन तपाईंको दिईएको वेबसाइटहरूबाट डाटा निकाल्दछ। तपाईं साईटम्यापहरू आयात गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको वेबसाइटको समग्र रूप र प्रदर्शन वृद्धि गर्न यसको टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंको निकालेको डेटा CSV फाईलहरू वा यसको आफ्नै संग्रह फोल्डरमा बचत गर्दछ।